Serivisy fiantohana Ho amidy sy manofa amin'ny Realtyww Info
1 - 2 ny 2 Listings
View Serivisy fiantohana Published 11 months ago
View Serivisy fiantohana Published 3 years ago
Ny fiantohana dia fomba fiarovana amin'ny fatiantoka ara-bola. Izy io dia endrika iray amin'ny fitantanana risika izay matetika ampiasaina amin'ny fefy manohitra ny fatiantoka tsy azo antoka. Ny orinasa izay manome fiantohana dia fantatra amin'ny fiantohana, orinasa fiantohana, na mpitatitra fiantohana. Ny olona iray na fikambanana manana fividianana fiantohana dia fantatra amin'ny maha-antoka na tompon'antoka pôlitika. Ny fifanakalozana fiantohana dia misy ny fiantohana amin'ny fahazoana antoka sy fanta-daza kely amin'ny endrika fandoavam-bola amin'ny orinasa mpampiasa ho takalon'ny fampanantenan'ny mpivarotra hanonerana ny antoka raha toa ka fatiantoka voafehy. Ny fatiantoka dia mety na mety tsy ara-bola, saingy tsy maintsy averina amin'ny lafiny ara-bola izany, ary tsy maintsy tafiditra amin'ny zavatra ifandraisan'ny tompon'antoka amin'ny fiantohana ara-bola, fananana, na fifandraisan'ny preexisting. Ny tompon'antoka dia mahazo fifanarahana, antsoina hoe politikam-piantohana, izay manome antsipiriany ny toe-javatra sy ny toe-javatra izay hahazoana valim-bola takiana ara-bola. Ny habetsaky ny vola natolotry ny mpampiasa fiantohana ho an'ny voarohirohy amin'ny fandrakofana napetraka ao amin'ny politikam-piantohana dia antsoina hoe sanda. Raha toa ka mahatsapa fatiantoka ny voatifitra izay mety voasarona amin'ny politikan'ny fiantohana, ny tompon'antoka dia mametraka fitakiana amin'ny orinasa mpampindram-bola ho fanodinana amin'ny fangatahana fitakiana.